म २८ बर्षकी भनौँ वा को, पुरुष–भनौँ या महिला मसँग लिङ्ग र योनी दुबै छ दुबैमा सेक्स गर्न मन लाग्छ… - OneZero News
म २८ बर्षकी भनौँ वा को, पुरुष–भनौँ या महिला मसँग लिङ्ग र योनी दुबै छ दुबैमा सेक्स गर्न मन लाग्छ…
तपाईको प्रश्न थाहाँ पाउँदा तपाईको जन्म प्राकृतिक रुपमा नै अन्तर्लिङ्गी भएर जन्मिनु भएको छ । यस्तो विश्वमा अहिले एक लाख जनसंख्यामा १ जनामा देखिन थालेको छ । तपाईको प्रश्नको जवाफ यो पठन सामाग्रीले निवारण गर्छ । अन्तर्लिङ्गीका बारेमा जान्न र यस बारे थुप्रै भ्रम र गलत अवधारणाहरू हटाउन यो लेख पढ्नुहोस्। नेपालमापनि धेरै अन्तर्लिङ्गी छन् । धेरै तड्पिएर बसेका छन् । उनीहरुको सहयोगका लागि सेयर गरिदिनुहोला ।
१) अन्तर्लिङ्गी(Intersex) भनेको के हो?
कुनै पनि व्यक्ति जस्को यौनाङ्ग पूर्ण रूपमा पुलिङ्गी वा स्त्रीलिङ्गी छुट्टिँदैन, त्यसलाई अन्तर्लिङ्गी भनिन्छ। व्यक्तिहरूमा जब XY chromosomes हुन्छ तब उनीहरू पुलिङ्गी हुन्, जब XX chromosomes हुन्छ उनीहरू स्त्रीलिङ्गी हुन् र जब XXY, XO, XYY, XXYY, XXXY, XY/XO, XX/XO, XX/XY chromosomes जस्ता हरू हुन्छन् तब अन्तर्लिङ्गी हुन्छन्
२) त्यस भए अन्तर्लिङ्गीको शारीरिक बनोट कस्तो हुन्छ?
अन्तर्लिङ्गी सबै एकै नाश हुन्न। अन्तर्लिङ्गी एउटा छाता शब्द हो ती व्यक्तिहरू जस्लाई पूर्ण रूपमा पुलिङ्गी वा पूर्ण रूपमा स्त्रीलिङ्गी भन्न सकिँदैन। यसमा धेरै विविधता हुन्छ। जस्तै कुनै अन्तर्लिङ्गीहरूको दुबै लिङ्ग र योनी हुन्छ। कुनै अन्तर्लिङ्गीको बाहिरी शरीर पुलिङ्गी भए आन्तरिक शरीर स्त्रीलिङ्गी हुन्छ। कुनै अन्तर्लिङ्गीको बाहिरी शरीर स्त्रीलिङ्गी भए आन्तरिक शरीर पुलिङ्गी हुन्छ। यदि तपाइँ अन्तर्लिङ्गीहरूको यौनाङ्ग कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न चाहनु हुन्छ भने यता क्लिक गर्नुहोस्। यस लेखमा अन्तर्लिङ्गीहरूको यौनाङ्गको चित्रहरू पाइन्छ।
४) के अन्तर्लिङ्गीहरू उभयलिङ्गी(Hermaphrodites) हुन्?
अन्तर्लिङ्गी र उभयलिङ्गी(Hermaphrodites)मा ठूलो फरक छन्। फर क के हो भने उभयलिङ्गी भनेको त्यस्तो जीव हो जस्मा एउटै जीवको पुलिङ्गी प्रजनन अङ्ग र स्त्रीलिङ्गी प्रजनन अङ्ग दुबै पूर्ण रूपमा हुन्छन् र ती जीवहरूले आफूले आफैलाई यौन सम्पर्क गरेर बच्चा उत्पादन गर्न सक्छ। तर यो उभयलिङ्गीको अस्तित्व स्तनधारी प्राणी (Mammals) हरूमा असम्भव छ। कुनै अन्तर्लिङ्गी सँग दुबै लिङ्ग र योनी त हुन्छ तर पूर्ण प्रजनन अङ्ग हुँदैन। अन्तर्लिङ्गीले अफु सँग आफै सेक्स गरेर बच्चा उत्पादन गर्न सक्दैन। त्यसैले अन्तर्लिङ्गीहरूलाई उभयलिङ्गीको बिल्ला लगाउन मिल्दैन।
५)अन्तर्लिङ्गीको स्वभाव पुरुषको जस्तै हुन्छ कि महिलाको जस्तै? अनि उनीहरूको आकर्षण को प्रति हुन्छ?
जस्तै हामीले पहिले नि कुरा गर्यौँ, अन्तर्लिङ्गी हुनु जैविक लिङ्ग हो। यसको नीजसँग सामाजिक लिङ्ग र यौन अभिमुखिकरणमा सम्बन्ध हुँदैन। एक अन्तर्लिङ्गी व्यक्ति पुरुष स्वभावको नि हुन सक्छ, महिला स्वभावको नि हुन सक्छ। त्यसै गरी कोही अन्तर्लिङ्गीहरू पुरुष तर्फ आकर्षित हुन्छन्, कोही महिला तर्फ, कोही अन्तर्लिङ्गी नै तर्फ।
६) के अन्तर्लिङ्गी हुनु एउटा असामान्यता वा रोग हो?
अन्तर्लिङ्गी हुनु कुनै रोग वा असामान्यता होइन। एकदमै प्राकृतिक र सामन्य हो। फरक यति मात्र हो कि उनीहरू कम मात्रामा जन्म लिन्छन् र सामाजले हेयको नजरले हेर्छन्। अन्तर्लिङ्गीहरू समाजमा पहिले देखि थिए तर हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाले उनीहरूको अस्तित्वलाई नकार्दै आए। मैले भनेको जस्तै अन्तर्लिङ्गीका XXY, XO, XYY, XXYY, XXXY, XY/XO, XX/XO, XX/XY chromosomes कुनै जीन उत्परिवर्तन(Genetic mutation) होइन। किन भने कुनै व्यक्ति फरक छ भन्दैम उसलाई असामान्य भन्न मिल्दैन। अन्तर्लिङ्गी रोग र असामान्य हुनुको कुनै प्रमाण छैन। कोही अन्तर्लिङ्गी कसरी जन्मन्छ? यस पछाडीको विज्ञानका लागि हेर्नुहोस्:
७) कोही अन्तर्लिङ्गी भएको कसरी थहा पाउने?
जस्तै मैले भने अन्तर्लिङ्गीमा धेरै विविधता छ। कुनै अन्तर्लिङ्गी जसको दुबै लिङ्ग र योनी लिएर जन्मन्छन् उनीहरूको जन्मजातै अन्तर्लिङ्गी भनेर थहा पाउन सकिन्छ। तर जस्तै कुनै अन्तर्लिङ्गीको बाह्य अङ्ग पुलिङ्गी र भित्री अङ्ग स्त्रीलिङ्गी भएमा उसको बारे किशोरावस्थामा थहा पाइन्छ। जनमदा बाहिर बाट स्त्रीलिङ्गी लागे पनि किशोरावस्थामा स्थन नबढ्ने, महिनावारी नहुने, दारी जुँगा आउने, स्वर मोटाउने इत्यादिबाट मात्र थहा हुन्छ।
८) अन्तर्लिङ्गी भनेको त यौन विकासका विकार(Disorders of Sex Development) भन्छन् रे!
बीसौँ शताब्दीमा अन्तर्लिङ्गी हुनुलाई यौन विकासका विकार(Disorders of Sex Development) मानिन्थ्यो। र यसलाई रोग सरह उपचार गर्नु पर्छ भनेर उपचार खोजिरहन्थ्यो। यदि इन्टर्नेट र कुनै पुस्तक बीसौँ शताब्दी को हो भने त्यसमा यस्तै लेखिएको हुन्छ। तर सेक्सविज्ञहरूले अन्तर्लिङ्गी(Intersex) र यौन विकासका विकार(Disorders of Sex Development)का बीच भिन्नता छुट्याइसकेका छन्। हो विभिन्न अवस्थाहरूमा अन्तर्लिङ्गीका जस्तै यौनाङ्ग लिएर जन्मनु रोग हुन सक्छ। जस्तै मानिल्यौँ कुनै व्यक्तिको लिङ्गको टुप्पोमा प्वाल नभैकन लिङ्गको बीचमा प्वाल छ। यसबाट बचालाई पिसब फेर्नमा समस्या हुन्छ। यसको शल्यक्रिया नगरेका क्यान्सर हुन सक्छ। यो हो यौन विकासका विकार(Disorders of Sex Development)। तर कुनै व्यक्तिका दुबै योनी र लिङ्ग छ, ऊ यसका कारणबाट रोगी छैन, स्वस्थ छ। यी दुइटा यौनाङ्गले कुनै समस्या उत्पादन गर्दैन, यो अन्तर्लिङ्गी हो।
९) अन्तर्लिङ्गी बच्चाहरूमा शल्यक्रिया गरेर सामान्य बाउन सकिन्छ रे!
अन्तर्लिङ्गी हुनु कुनै असामान्यता होइन। सर्वप्रथम त यदि यौन विकासका विकार(Disorders of Sex Development) भए मात्र शल्यक्रिया गर्नु पर्छ। नभए नीजलाई आफ्नो यौन अङ्गबाट कुनै समस्या उत्पादन हुँदैन। तर बाल्यावस्थामै अन्तर्लिङ्गीको शल्यक्रिया गर्नु हुँदैन। यसले बच्चाको भविष्यमा असर पार्छ। यदि शल्यक्रिया गर्ने नै विचार छ भने त्यस व्यक्ति १८ वर्ष पुगेर स्व निर्णय गरेर गराउनुपर्छ अन्यथा जन्मन बित्तिकै आमा बुबाले गर्दिनु बाल अधिकार खिलाफ हो र यो यौन अङ्ग बिगर्दिने प्रयासका रूपमा चिनिन्छ। यदि कुनै अन्तर्लिङ्गीले शल्यक्रिया नगर्ने जस्तो छ त्यतै बस्ने भन्ने निर्णय गरे त्यो उसको अधिकार हो। कसैले उसको प्रकृतिलाई जबरजस्ती परिवर्तन गराउनु मिल्दैन। अनि धेरै अन्तर्लिङ्गीहरूमा यो शल्यक्रिया र हर्मोन थेरापि असफल हुने गर्दछ। अन्तर्लिङ्गी अपरिवर्तनशील कुरा हो। थोरैमा त्यस्ता शल्यक्रिया सफल हुन्छ तर अधिकांशका शरीरमा त्यस पश्चात् नाना थरीका समस्याहरू उत्पन्न हुने गर्दछ।
१०) त्यस भए अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई दाइ/दिदी वा कुन शब्दको प्रयोग गर्ने?
अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई उनीहरू जुन शब्दबाट सम्बोधित हुन चाहन्छ, त्यही शब्दको प्रयोग गर्नु पर्छ। उनीहरूलाई दाइ, भाइ, इत्यादि भन्न रुचाउँछन् भने त्यही शब्दको प्रयोग गर्ने। उनीहरूलाई दिदी, बहिनी इत्यादि भन्न रुचाउँछन् भने त्यही शब्दको प्रयोग गर्ने।
१६) शौचालयको व्यवस्था कस्तो हुनु पर्छ?
यस्मा तीन मत रहेको पाइन्छ।
अन्तर्लिङ्गी(पारलिङ्गीलाई पनि समावेश गरेर) छुट्टै अर्को शौचालय बनाउने
अन्तर्लिङ्गी स्वेच्छामा पुरुष वा महिलाको शौचालयमा जान दिने
लिङ्ग निष्पक्ष शौचालय(Gender neutral toilet) को निर्माण गर्ने
१७) यस्तो वाहियात कुरा पहिले कहिल्यै सुन्या थिएन। अहिले आएको नयाँ जीव हो?
तपाइँको विचार संकीर्ण भयो भन्दैमा कसैलाई वाहियाद भन्न पाइँदैन। अन्तर्लिङ्गीहरू यस विश्वको आदिकालदेखि नै थिए। फरक यो मात्र हो कि तपाइँलाई यस बारे थहा छैन। अन्तर्लिङ्गी बच्चा जन्मन बित्तिकै धेरै देशहरूमा हत्या, अनावश्यक शल्यक्रिया गर्ने भएकाले यस्तो लागेको हो।
इतिहासमा हेर्दा विभिन्न संस्कृति, धर्म शास्त्र, लेख, अभिलेखहरूमा अन्तर्लिङ्गी बच्चाहरूका बरेमा प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। फरक यो मात्र हो कि कुनै संस्कृतिमा यसलाई नकरात्मक रूपले हेरिन्छ भने कुनैमा सकरात्मक। इतिहासका विभिन्न सभ्यताहरूमा अन्तर्लिङ्गीहरू उल्लेखनीय छन्। उदाहरणका लागि सुमेरी सभ्यताको एक मिथ्या कथामा निमा नामक एक अन्तर्लिङ्गी भगवानलाई मानिन्छ। एक ग्रीक लेखक Diodorus Siculusले एकौँ शताब्दीमा Hermaphroditus पुस्तकमा अन्तर्लिङ्गीका बारेमा लेखेका थिए। अन्तर्लिङ्गीहरू कुनै नयाँ जीव होइन, उनीहरूको अस्तित्व मानवताको आदिकाल देखि थियो र रहनेछ।
पारलिङ्गीका बारेमा जान्न र यस बारे थुप्रै भ्रम र गलत अवधारणाहरू हटाउन यो लेख पढ्नुहोस्।
१) पारलिङ्गी(Transgender) भनेको के हो?
जो व्यक्ति शारीरिक रूपले पुरुष वा महिला भएपनि मानसिक, भावनात्मक र व्यवहारिक रूपले सो भन्दा फरक हुन्छ उनीहरू पारलिङ्गी हुन्। उदाहरणका लागि: कुनै एक व्यक्ति जो शारीरिक रूपले पुरुष र मानसिक रूपले पनि पुरुष स्वभावकै छ भने, ऊ पारलिङ्गी होइन। कुनै एक व्यक्ति जो शारीरिक रूपले महिला र मानसिक रूपले पनि महिला स्वभावकै छ भने, ऊ पनि पारलिङ्गी होइन। तर यी बाहेकका सबै जो शारीरिक रूपमा एउटा लिङ्ग भएपनि मानसिक रूपले फरक लिङ्गका हुनेहरू पारलिङ्गी हुन्।
२) पारलिङ्गीको शारीरिक अवस्था कस्तो हुन्छ?
शारीरिक अवस्थामा कुनै शङ्का छैन। उनीहरू शारीरिक रूपले पूर्ण रूपमा पुरुष वा पूर्ण रूपमा महिला नै हुन्छन्। फरक भनेको उनीहरूको स्वभाव र मानसिकता हो।
३) पारलिङ्गी पनि थरि थरि का हुन्छन्? अब शारीरिक लिङ्ग र मानसिक लिङ्ग नमिल्ने भनेपछि २ प्रकारका होलन्: एक जो शारीरिक रूपमा पुरुष र मानसिक रूपमा महिला अनि अर्को शारीरिक रूपमा महिला र मानसिक रूपमा पुरुष!
होइन, जस्तै हामीले भन्यौँ अन्तर्लिङ्गी एउटा छाता शब्द हो, त्यसै गरी पारलिङ्गी पनि छाता शब्द हो। पारलिङ्गी पनि थुप्रै प्रकारका हुन्छन्। शारीरिक रूपले पुरुष वा महिला भएपनि मानसिक, भावनात्मक र व्यवहारिक रूपले सो भन्दा फरक हुनु पनि धेरै थरीका हुन्छन्। ती हुन्: पारलिङ्गी महिला(Transgender woman), पारलिङ्गी पुरुष(Transgender man), Agender, Bigender, Androgyne, Genderfluid
४) पारलिङ्गी महिला(Transgender woman) कस्तालाई भनिन्छ?
जो व्यक्ति शारीरिक वा भौतिक रूपले पुरुष तर मानसिक, व्यवहारिक र स्वभाविक रूपले महिला हुन्छन्, ती हुन् पारलिङ्गी महिला(Transgender woman)। अब हेर्नुस्, शारिरिक रूपले पुरुष भनेपछि उनीहरू देखिने वा शारीरिक ढाँचा त पुरुषकै हुन्छ। मात्र महिलाको व्यवहार र स्वभाव हुन्छ। जस्तै हिँडाइ, बोलाइ र रहनसहनका ममिलाहरूमा। यो उनीहरूको प्राकृतिक अवस्था हो जस्लाई हामी Non-operative transwoman पनि भन्दछौँ। अब धेरै पारलिङ्गी महिलाहरूले हर्मोन थेरापि गर्छन्। यस थेरापिमा व्यक्तिले स्त्रीलिङ्गी हर्मोन इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन औषधिमा खने वा सुइमा लिने गर्दछन्। यसले गर्दा केही वर्षहरूमा उनीहरूमा महिलाको शारीरिक आकार आउँछ। जस्तै स्तन बढ्ने, छाला नरम हुने, रौं हराउँदै जाने, इत्यादि। अनि हेर्दा खेरी महिला जस्तै देख्न थाल्छन्। यस हर्मोन थेरापिलाई हामी Male-to-female hormone replacement therapy भन्छौँ। यस थेरापि के हो र बाट आउने परिवर्तनहरूका बारेमा अझै बढी जान्न अङ्ग्रेजी भाषाको यो लेख पढ्नुहोस्। अब जब उनीहरू महिला जस्तै देखिन थाल्छन्, तर लिङ्ग त हुन्छ, यो अवस्थालाई हामी Pre-operative transwoman भन्छौँ। र अन्त्यमा यदि उनीहरू लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहन्छन् भने, लिङ्गलाई योनीमा परिवर्तन गर्न शल्यक्रिया गर्छन्। यो अवस्थामा हामी उनीहरूलाई Post-operative transwoman भन्छौँ।
४) पारलिङ्गी पुरुष (Transgender man) कस्तालाई भनिन्छ?
जो व्यक्ति शारीरिक वा भौतिक रूपले महिला तर मानसिक, व्यवहारिक र स्वभाविक रूपले पुरुष हुन्छन्, ती हुन् पारलिङ्गी पुरुष(Transgender man)। अब हेर्नुस्, शारिरिक रूपले महिला भनेपछि उनीहरू देखिने वा शारीरिक ढाँचा त महिलाकै हुन्छ। मात्र पुरुषको व्यवहार र स्वभाव हुन्छ। जस्तै हिँडाइ, बोलाइ र रहनसहनका ममिलाहरूमा। यो उनीहरूको प्राकृतिक अवस्था हो जस्लाई हामी Non-operative transman पनि भन्दछौँ। अब धेरै पारलिङ्गी पुरुषहरूले हर्मोन थेरापि गर्छन्। यस थेरापिमा व्यक्तिले पुलिङ्गी हर्मोन टेस्टेस्टेरोन् औषधिमा खने वा सुइमा लिने गर्दछन्। यसले गर्दा केही वर्षहरूमा उनीहरूमा पुरुषको शारीरिक आकार आउँछ। जस्तै स्तन धट्ने, छाला खस्रो हुने, रौं पलाउँदै आउने, इत्यादि। अनि हेर्दा खेरी पुरुष जस्तै देख्न थाल्छन्। यस हर्मोन थेरापिलाई हामी Female-to-male hormone replacement therapy भन्छौँ। यस थेरापि के हो र बाट आउने परिवर्तनहरूका बारेमा अझै बढी जान्न अङ्ग्रेजी भाषाको यो लेख पढ्नुहोस्। अब जब उनीहरू पुरुष जस्तै देखिन थाल्छन्, तर योनी त हुन्छ, यो अवस्थालाई हामी Pre-operative transman भन्छौँ। र अन्त्यमा यदि उनीहरू लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहन्छन् भने, योनीलाई लिङ्गमा परिवर्तन गर्न शल्यक्रिया गर्छन्। यो अवस्थामा हामी उनीहरूलाई Post-operative transman भन्छौँ।
५) Agender भनेको के हो?
Agender शब्दको खस भाषामा कुनै ठीक उल्था छैन। तर Agender भनेका ती व्यक्ति हुन् जो आफूलाई न पुरुष भएको अनुभव गर्छन् न महिला भएको। उनीहरू आफुलाई पुरुष पनि होइन महिला पनि होइन भनेर चिनाउँछन्। उनीहरूको कुनै लैङ्गिक पहिचान छैन भनेर भन्छन्। थप जानकारीका लागि यो पढ्नुहोस्।
६) Bigender भनेको के हो?
Bigender शब्दको पनि खस भाषामा कुनै ठीक उल्था छैन। तर Bigender भनेका ती व्यक्ति हुन् जो आफूलाई दुबै पुरुष र महिला ठान्दछन्। उनीहरू कहिले पुरुष स्वभवका भने कहिले महिला स्वभावका हुन्छन्। थप जानकारीका लागि यो पढ्नुहोस्।
७) Androgyne भनेको के हो?
Androgyne शब्दको पनि खस भाषामा कुनै ठीक उल्था छैन। तर Androgyne भनेका ती व्यक्ति हुन् जसको स्वभाव दुबै पुरुष र महिलाको मिश्रित हुन्छ। थप जानकारीका लागि यो पढ्नुहोस्।
८) Gender Fluid भनेको के हो?
Gender Fluid शब्दको पनि खस भाषामा कुनै ठीक उल्था छैन। तर Gender Fluid भनेका ती व्यक्ति हुन् स्वभाव पुरुषत्व देखि नारीत्वबीच झुलि रहन्छ। जस्तै कहिले उनीहरू एकदम पुरुष जस्तै व्यवहार देखाउँछन्। कहिले एकदम महिला जस्तै व्यवहार देखाँछन्। कहिले ती पुरुषत्व र नारीत्वको बीचमा हुन्छ। जसको थप जानकारीका लागि यो पढ्नुहोस्।
८) Bigender, Androgyne र Gender Fluidहरूमा हल्का कन्फ्यूज भएँ!
Androgyne भनेपछि पुरुष व्यवहार र महिला व्यवहार देबै सँगै मिश्रित भएरा आउने, दुबै बराबर र सँगसँगै हुने। Bigender भनेपछि एक बेला केवाल पुरुषको मात्र व्यवहार हुने र एक बेला महिलाको मात्र व्यवहार हुने, दुबै सँगै नाआउने। Gender Fluid भनेपछि पुरुष व्यवहार र महिला व्यवहार देबै बिन्दुको बीचमा जे पनि हुनसक्ने, व्यवहार परिवर्तनशील हुने।
९) हिजडा भनेको के हो? के हिजडा भनेको पारलिङ्गी हो?
हिजडा खास गरी कुनै लिङ्ग नै होइन। यो केवल एउटा समुदाय र संस्कृति हो जुन भारतमा एकदम प्रचलित छ र नेपालको तराईमा पनि। यस संस्कृति करिब ४००० वर्ष देखि प्रचलित छ। अधिकांश यस समुदायमा पारलिङ्गी महिला(शारीरिक रूपमा पुरुष र मानसिक रूपमा महिला)हरू भित्रने हुनाले यो भ्रम रहेको पाइन्छ। यस समुदायमा पुरुषहरू पनि भित्रिन्छन्। यसमा भित्रिसके पछी यसका कट्टर नियमहरू पालना गर्नु पर्छ। सर्वप्रथम त अण्डकोस काट्नु पर्छ। महिलाकै भेषमा बस्नु पर्छ। कुनै कामकाजमा लाग्नु हुन्न। केवल ब्रतबन्ध, विवाह र अन्य शुभ मानिने कार्यहरूमा आशिर्वाद दिने र नाच्ने काम गर्नु पर्छ। कहिल्यै उठेर पिसाब फेर्नु हुन्न। उनीहरूले हिजडा परम्परा अनुसार नै आफ्नो जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। भारतमा हिन्दु परम्परा अनुसार उनीहरूलाई पवित्र मनिने गरिन्छ। त्यसैले पारलिङ्गीलाई हिजडा भन्ने कुनै आधारै छैन।
अझै जन्नका लागि पढ्नुहोस्: छक्का वा हिजडा शब्दका अर्थ नबुझेकाले किन ती शब्द प्रयोग गर्छन्?
१०) के पारलिङ्गीलाई तेस्रोलिङ्गी भन्न मिल्छ?
तेस्रोलिङ्गी एउटा आफैमा विभेदकारी शब्द हो। तेस्रोलिङ्गी भन्नले लिङ्गलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरेर विभेद प्रकट गर्नु हो। धेरै पारलिङ्गीहरूले आफूलाई “तेस्रोलिङ्गी” ठाने पनि, यो शब्द आफैमा अपशब्द हो। लिङ्ग कहिल्यै पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुँदैन। यस विचारका तर्कहरू अझै पढ्न मेरो अङ्ग्रेजी भाषाको यो लेख र खस भाषाको यो लेख पढ्न सक्नु हुनेछ।
११) पारलिङ्गीहरू को तर्फ आकर्षित हुन्छन्?
जस्तै हामीले पहिल्यै भनिसकेको कुरा हो। पारलिङ्गी एउटा सामाजिक लिङ्ग हो यौन अभिमुखिकरण होइन। पारलिङ्गी व्यक्तिको पनि आ-आफ्नै यौन अभिमुखिकरण हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा पारलिङ्गी महिला पुरुष तर्फ आकर्षित हुन्छ भने कुनै पारलिङ्गी महिला महिला तर्फ आकर्षित हुन्छ, कुनै दुबै तर्फ वा कुनै पारलिङ्गी महिलै तर्फ। यो नीजको यौन अभिमुखिकरणमा भर पर्छ।
१२) यदि लिङ्ग परिवर्तन गरेर कोही पारलिङ्गी महिला स्त्रीलिङ्गी हुन सक्छ भने उस्को मानसिकतालाई परिवर्तन गरी पुरुषै किन बनाउन मिल्दैन? यही कुरा पारलिङ्गी पुरुषलाई पनि!
सर्वप्रथम त यो हो कि लिङ्ग अपरिवर्तनशील कुरा हो। पारलिङ्गी महिला- जो शारीरिक रूपले पुरुष र मानसिक रूपले महिला- उनीहरूको शरीरमा केही औषधीको प्रयोगले महिला जस्तै देखिन्छ। यो औषधि जीवन भरी प्रयोग गर्नु पर्छ र छोडेमा फेरी केही वर्ष पछि पुरुष जस्तै देखिन थाल्छ। लिङ्ग परिवर्तन भन्नाले पुलिङ्गीलाई स्त्रीलीङ्गीमा परिवर्तन गरेको होइन। यो मिल्दैन। केवल लिङ्गलाई शल्यक्रियाद्वार योनी बनाएको हो। शल्यक्रिय पश्चात पनि थुप्रै औषधि खानु पर्छ र योनीमा १ वर्ष सम्म दिनका दिन डिल्डो छिराउनु पर्छ, अन्यथा कृत्रिम योनीमा मासु पलाएर बन्द हुन्छ। यो केवल यौनाङ्ग पुनः निर्माण हो। तर ती व्यक्तिको XY chromosome चाहीँ XX chromosome मा परिवर्तन हुँदैन। सोही कुरा पारलिङ्गी पुरुषमा पनि लागु हुन्छन्। मानसिकता परिवर्तन गर्न दिमाखै निकालेर अर्को हाल्ने, दिमागका जटिल नशाहरू परिवर्तन गर्न मिल्दैन।
१३) लैङ्गिक वरिक्तता(gender dysphoria) के हो?
जब कुनै व्यक्ति आफू जन्मेको शारीरिक लिङ्गप्रति घृणा र असहजता अनुभव गर्छन् र त्यस भन्दा उल्टो लिङ्गको भएर जन्मेको भए भन्ने सोचाइ आउँछ, आफ्नो शारीरिक परिवर्तनबाट तिव्र घृणा महसुस गर्छन्, जसले गर्दा डिप्रेसन, मानसिक तनाव हुन्छ, त्यसलाई लैङ्गिक वरिक्तता(Gender dysphoria) भनिन्छ। सबै पारलिङ्गीहरूमा लैङ्गिक वरिक्तताहुनै प्रछ भन्ने आवश्यक छैन। जस्तै मानौँ कुनै पारलिङ्गी महिला- जो शारीरिक रूपले पुरुष र मानसिक रूपले महिला- उसलाई आफ्नो दारीजुँगा देखेर अत्ति दिक्क लाग्ने, तीब्र घृणा हुने, आफूसँग लिङ्ग मन नपराउने, नभए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने, इत्यादि लैङ्गिक वरिक्तता हो। लैङ्गिक वरिक्ततालाई बीसौँ शताब्दीमा Gender identity disorder भनिन्थ्यो तर अब यो भावना प्राकृतिक हो भनेपछि वा रोग भएको प्रमाण नभएपछि Gender dysphoria भनिएको हो। यो भावना प्राकृतिक भएपनि नकरात्मकता ल्याउने र नीजको मानसिक स्वास्थतालाई हानी पुर्याउने भएकाले यसलाई कम गर्न वा यो भावना उल्पन्न हुन नदिन हर्मोन थेरापि र यौनाङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गरिन्छ। अझ बढी जान्न यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
१४) के पारलिङ्गी हुनु रोग, असामान्यता हो?
पारलिङ्गी हुनु कुनै रोग या असामान्यता होइन। यो रोग भएको कुनै प्रमाण छैन। यो पूर्ण रूपमा प्राकृतिक हो। न यो कुनै प्रकारको हर्मोन गडबडी हो। विभिन्न वैज्ञानिकहरूले यो हर्मोन गडबडी हो अप्राकृतिक हो वा रोजाइ हो भनेर थियोरि प्रास्ताव गरेका पनि छन्। इन्टर्नेटमा त्यस्तो भन्ने थुप्रै लेखहरू छन्। तर यो जान्नु जरूरी छ कि ती तर्कहरू को आलोचना भएर अप्रमाणित भैसकेका छन्। यस्तो लेखहरू पढ्दा भर पर्दो स्रोतबाट पढ्नु पर्छ, जस्तै अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इत्यादि। केही भर्पर्दो स्रोतका लेख यी हुन्:
१५) यो एउटा जीवन शैली हो। पहिला पहिला त यो पारलिङ्गीका बरेमा सुनिदैनथ्यो। अहिले मात्र यस्तो कुरा सुन्न पाइरहेका छौँ। यो पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभाव हो।
यो कुनै पनि जीवन शैली होइन। मानील्यौँ कि मानिसहरुलाई आफ्नो सामाजिक लिङ्गमा रोजाइ छ। त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरू समाजमा अपहेलित हुन, अस्वीकारेको वर्ग हुन किन रोज्लान् त? तपाइँले पहिले सुन्नु भएन किन भने हाम्रो सामाजिक बनोट नै त्यस्तो छ। उदाहरण लिऔँ साउदी अरबको। साउदीमा समलिङ्गीहरुलाई कठोर मृत्युदण्द दिइन्छ तर अझ पनि त्यहाँ पारलिङ्गीहरू छन्। त्यहाँका पारलिङ्गीहरू पहिला पश्चिमेली देशमा भग्छन्, त्यहाँ स्थायी वास गरेपछि, पारलिङ्गी भएको खुलासा गर्छन्। विश्वमा पारलिङ्गीको अस्तित्व आदिकाल देखि नै थियो। हो संकीर्णता वा अज्ञानताका कारण विभिन्न कालखण्डहरूमा पारलिङ्गीहरुलाई अति-विभेद थियो तर पारलिङ्गीको अस्तित्व आदिकाल देखि नै थियो। यस तर्कलाई साथ दिने प्रमानहरू यस किसिमले छन्: A Short History of Transgender/Transsexualism यस लेखमा तपाइँले पारलिङ्गीका बरेमा इतिहास पढ्न सक्नु हुनेछ। जस्मा विभिन्न कालखण्डमा पारलिङ्गीलाई कस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ र पारलिङ्गीको बारेमा व्याप्त संस्कृतिका बरेमा पनि।
१६) त्यस भए पारलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई दाइ/दिदी वा कुन शब्दको प्रयोग गर्ने?
पारलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई उनीहरू जुन शब्दबाट सम्बोधित हुन चाहन्छ, त्यही शब्दको प्रयोग गर्नु पर्छ। उनीहरूलाई दाइ, भाइ, इत्यादि भन्न रुचाउँछन् भने त्यही शब्दको प्रयोग गर्ने। उनीहरूलाई दिदी, बहिनी इत्यादि भन्न रुचाउँछन् भने त्यही शब्दको प्रयोग गर्ने।
१७) शौचालयको व्यवस्था कस्तो हुनु पर्छ?
पारलिङ्गी(अन्तर्लिङ्गीलाई पनि समावेश गरेर) छुट्टै अर्को शौचालय बनाउने
पारलिङ्गी व्यक्तिहरू आफूलाई जे भनेर चिनाउँछन् सोही लैङ्गिक पहिचान अनुसार पुरुष वा महिला शौचालयमा जान दिने। जस्तै पारलिङ्गी महिलाहरूलाई महिलाको शौचालय प्रयोग।
१८) पारलिङ्गीहरू एकदमै यौन रूपमा अति सक्रिय र वैश्यावृतिमा लागेका हुन्छन्, खास गरी पारलिङ्गी महिलाहरु। यिनीहरूमा प्रेम भन्ने चीज हुँदैन। खाली यौन सम्पर्क
सर्वप्रथम त यौन उत्तेजन सबै व्यक्तिहरूमा हुन्छ। कोहीमा बढी हुन्छ भने कोहीमा थोरै तर यौन इच्छा सबैमा हुन्छ। अब हो धेरै पारलिङ्गी महिलाहरू वैश्यावृतिमा लागेका हुन्छन्। धेरैको आ-आफ्नै बाध्यता हुन्छ। तर रहर र स्व-निर्णयले गर्ने पनि थुप्रै छन्। राम्रो जागिर पाउँदा पनि वैश्यावृतिमा लागेका थुप्रा छन्। तर यस कारणै सबै पारलिङ्गी(विशेष गरी पारलिङ्गी महिला)हरूलाई एउटै नजरले हेर्नुहुन्न। सबैको जीवनमा आ-आफ्नो रोजाइ हुन्छ, आ-आफ्नै जीवनशैली हुन्छ। वैश्यावृतिमा लागेकालाई सकरात्मक रूपले लिने कि नकरात्मक रूपले लिने भनेर नीजको विचारधारामा भर पर्छ। तर धेरै सङ्ख्यामा पारलिङ्गी महिलाहरू लागे भन्दैमा सबै जनालाई सामान्यीकरण गर्नु त मिल्दैन। समाजमा पारलिङ्गीहरू मात्र होइन धेरै जाना महिला र पुरुषहरू पनि वैश्यावृतिमा लागेका छन्। यस्तो प्रकारको सामान्यीकरण गर्नु गलत हो।
कसले भन्यो कि पारलिङ्गीहरू माय गर्दैनन् वा एक जानासँग समर्पित भएर बस्न सक्दैनन्? यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छ जहाँ पारलिङ्गीहरू मायामा समर्पित भएका छन्। यदि पारलिङ्गीहरू माया नगर्ने खाली सेक्स मात्र खोज्ने भए वैवाहिक समानताको कुरै उठदैनथ्यो। केही वा धेरै पारलिङ्गीहरू खाली सेक्स मात्र रुचाउँछन् भन्दैमा सबैलाई त्यसरी नै सामन्यीकरण गर्नु मिल्दैन।
१९) पारलिङ्गीहरू(विशेष गरी पारलिङ्गी महिलाहरू) एकदमै छुच्चो र रिसाहा हुन्छन्!
सर्वप्रथम त यो केही वा धेरै जनाको स्वभाव हुँदैमा सबैमा सामान्यीकरण गर्न बन्द गरौँ। अनि पारलिङ्गीहरू (विशेष गरी पारलिङ्गी महिलाहरू) एकदमै छुच्चो र रिसाहा हुनुका थुप्रै मनो-सामाजिक कारक र तत्वहरू हुन्छन्। जस्तै एकदमै हेप्ने, बाटोमा हिँड्दा दुर्व्यवहार गर्ने, मानसिक तनाव दिने, इत्यादि। यसका कारण मानिसलाई पहिला डर हुन्छ। यो डर बिस्तारै रीसमा परिणत हुने हाम्रो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति हो। यदि कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर नाना थरीका मानसिक तनाव र डर दीराख्यो भने यो रीसमा परिणत हुन्छ। जुन पारलिङ्गीहरूलाई अति हुन्छ।
२०) के पारलिङ्गीहरू लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहन्छन्?
पारलिङ्गीहरू जस्मा Gender dysphoria हुन्छ उनीहरूमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने तीव्र इच्छा हुन्छ। तर सबै पारलिङ्गीहरू लिङ्ग परिवर्तन गर्छन् व गर्नै चाहन्छन् भन्नु मिल्दैन।
१) समलिङ्गी(Homosexual) भनेको के हो?
कुनै पनि व्यक्ति जो समान लिङ्ग तर्फ आकर्षित हुन्छ, ती समलिङ्गी हुन्। अर्थात जब कोही पुरुष पुरुषतर्फै आकर्षित हुन्छ, ऊ समलिङ्गी पुरुष(Homosexual man/Gay) हो। जब कोही महिला महिलातर्फै आकर्षित हुन्छ, ऊ समलिङ्गी महिला(Homosexual woman/Lesbian) हो। अझ थप जानकारीका लागि हेर्नुहोस्
२) कोही समलिङ्गी कसरी बन्छ? के यो एउटा रोग, असामान्यता हो?
पारलिङ्गी र अन्तर्लिङ्गीलाई जस्तै समाजका कट्टरपन्थीहरूले यो एउटा असामान्यता हो, रोग हो जस्ता वाहियाद र अवैज्ञानिक तर्क दिन्छन्। तर वैज्ञानिक रूपमा यो मानव यौनिकताको एक भिन्नता मात्र हो र यो आफैमा कुनै नकरात्मक मानसिकताको स्रोत होइन। समलिङ्गी हुनु पूर्ण रूपले प्राकृतिक हो र यो कुरालाई सन् १९७३मा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संगठन र सन् १९९०मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्।
३) यदि समलिङ्गी हुनु प्राकृतिक हो भने, रोजाइ होइन भने, किन मानिसहरू मात्र समलिङ्गी हुन्छ?
समलैङ्गिकता मानव प्रजाती बाहेक हजारौं लाखौँ जीवहरूमा पनि हुन्छ। मानव बाहेकका अनेकौँ जीवहरूमा समलिङ्गी यौन सम्पर्क, माया, जोडी मिलाउनु, र समलिङ्गी अभिभावक हुनुका समेत प्रमाणहरू छन्। यसका लगि हेर्नुहोस्:
४) हामीले त इन्टर्नेटमा पढेको कि समलिङ्गी भनेको अप्राकृतिक हो र त्यसमा वैज्ञानिक विवरण पनि छ।
विभिन्न वैज्ञानिकहरूले यो हर्मोन गडबडी हो अप्राकृतिक हो वा रोजाइ हो भनेर थियोरि प्रास्ताव गरेका पनि छन्। इन्टर्नेटमा त्यस्तो भन्ने थुप्रै लेखहरू छन्। तर यो जान्नु जरूरी छ कि ती तर्कहरू को आलोचना भएर अप्रमाणित भैसकेका छन्। यस्तो लेखहरू पढ्दा भर पर्दो स्रोतबाट पढ्नु पर्छ, जस्तै अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इत्यादि। समलिङ्गीलाई बद्नाम गर्न धेरै प्रपन्चहरू पनि रचिएका हुन्छन्।
५) Gay भनेको त केटाहरू जो केटीका स्वभाव हुन्छन् त्यही होइन?
होइन, हामीले भनिसकेका छौँ Gay भनेको समलिङ्गी पुरुष(Homosexual man) हो। पुरुषहरू जो महिलाका स्वभाव देखाउँछन्, आफूलाई महिला ठान्दछन्, उनीहरूलाई त पारलिङ्गी महिला(Transgender woman) भनिन्छ। हो हाम्रो दक्षिण एसियाली देशहरूमा यो भ्रम चाहीँ व्याप्त छ। तर अब हामीले यो लेख पढिसकेपछि यो भ्रम हटाउनु पर्छ र यथार्थ बुझ्नुपर्छ।
६) समलैङ्गिकता परिवर्तन हुन सक्छ र समलिङ्गीहरू विपरीतलिङ्गी हुन सक्छन्। यदि समलिङ्गी महिलाहरूलाई एकपटक पुरुष सँग सेक्स गराइदिएमा वा समलिङ्गी पुरुषहरूलाई एकपटक महिला सँग सेक्स गराएमा यो ठीक हुन्छ।
यी धारणाहरू एकदमै गलत, अवैज्ञानिक हुन्। कोही समलिङ्गी हुनु उसको जन्मजात यौनिक गुण हो। यो अपरिवर्तनशील हुन्छ। समलैङ्गिकता जन्म देखि हुन्छ। केही ढोङ्गी, पैसामा बिकेका वा कट्टर मानसिकताका डाक्टरहरू समलिङ्गीलाई रोग भन्ने र यसको उपचार हुन्छ भन्ने नानाथरिका दावा गरेर अनेकौँ उपचारका तालिका दिन्छन्। तर वैज्ञानिक जगत्‌मा यसको कुनै मान्यता छैन। यो केवल भ्रमात्मक कुरा मात्र हो। जब कि समलिङ्गी हुनु रोगै होइन भनेर प्रमाण आइसकेपछि, यसको उपचार भन्ने कुरै हुन्न।
Corrective rape भनेर मानिसहरू समलिङ्गीहरूलाई विपरीतलिङ्गी(Heterosexual)सँग बलजफत् करणी गर्न लगाउँछन्, बलादकार गर्न लगाउँछन्। तर यस्को हुनै वैज्ञानिक प्रमाण नै छैन। कुनै विपरीतलिङ्गी महिलालाई महिला सँगै केक्स गर् भन्दा के उसले सक्छ? त्यस भए एउटी समलिङ्गी महिला कसरी पुरुष सँग सम्बन्ध राखेछे? यस्तो प्रकारको धटिया कामले अझ समलिङ्गीहरूमा मानसिक तनाव बढ्छ। समलिङ्गी भनेको जन्मजात प्राकृतिक गुण हो र यो कहिल्यै जे गरे पनि परिवर्तन हुन्न, जसरी विपरीतलैङ्गिकता परिवर्तन हुँदैन। भारतमा हालै प्रिया वेदी नामक महिलाले आत्महत्या गरेकी छिन्। प्रिया वर्माको श्रीमान समलिङ्गी पुरुष थिए र समाजको डरले समाजको लाञ्छना छल्न प्रिया वर्मासँग विवाह गरेका थिए। विवाहको ४ वर्ष पश्चात पनि उनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध भएन। उनको श्रीमानले उनीसँग सेक्स गर्न खोज्दा गर्नै सक्दैनथे किन भने उन्को श्रीमानले त केटा मन पराउँथे। केटा मनपराउनेलाई केटी देखेर के उत्तेजना होला? अन्त्यमा प्रिया वर्माले आत्महत्या गरे। यो एकको मात्र होइन हजारौँको कथा हो। समलिङ्गीहरू समाजको बाध्यतामा विपरीतलिङ्गी विवाह त गर्लान तर उनीहरूको यौन जीवन पूर्ण धरापमा परेर जीवन बिग्रन्छ।
समलिङ्गीहरूलाई दबाबमा हालेर विपरीतलिङ्गी शारीरिक सम्बन्धमा राखेर कहिलयै विपरीतलिङ्गी बनाउन सकिन्न। के कुनै विपरीतलिङ्गी पुरुषले पुरुषसँग सेक्स गर्न सक्छ? के ऊ पुरुषको लागि उत्तेजित हुन सक्छ? सक्दैन भने किन समलिङ्गीहरूबाट यो अप्राकृतिक आशा राख्नु हुन्छ?
७) यो Ex-gay group हरूले त आफू समलिङ्गीबाट विपरीतलिङ्गीमा परिणत भएँ भन्छन्। अनि एउटा घटना थियो जहाँ पुरुषले म समलिङ्गी हुँ भनेर महिलालाई लगेछ र बलादकार गरिदिएछ।
समाजमा समलिङ्गी मन पराउने धेरै छन्। समलिङ्गीहरूलाई बद्नाम पर्न बेइज्जत पार्न खोज्नेको कमि छैन। Ex-gay group भनेर ती समलिङ्गीहरू हुन् जो समाजको दबाबमा वा धर्मिक अन्धविश्वासका आधारमा म परिवर्तन हुन सक्छु भनेर लागि परेका छन्। तर यो असम्भव छ। केही पैसाका लागि समलिङ्गी समानता विरोधीहरूले पैसा खुवाएर विपरीतलिङ्गीहरुलाई नि समलिङ्गी हुनुको ढोङ्ग गराइ यस्तो अनैतिक कृयाकलाप गराउँछन् र समलिङ्गीलाई बद्नाम पार्न खोज्छन्। यसका लागि अझै पढ्न यता क्लिक गर्नुहोस्।
८) समलिङ्गी हुनु वा समलिङ्गी विवाह गर्नु हाम्रो धर्मको विरुद्ध हो।
धार्मिक तर्क यस शताब्दीमा काम गर्ने वाला छैन्। यदि तपाइँ हेर्नु हुन्छ भने हिन्दु धर्म, बुद्ध धर्म र जैन धार्मका विभिन्न भागहरूमा समलिङ्गी, पारलिङ्गी र अन्तर्लिङ्गीको बारेमा लेखिएको पाइन्छ। तर यदि धर्मलाई नै हरेक कुराको आधार मान्ने हो भने:
ख्रीष्टियान धर्ममा Exodus 21:2-6मा दास प्रथालाई प्रोत्साहन गरिन्छ; Exodus 21:7-11 मा पिताले छोरीलाई बेच्न हुने अनुमती दिइएको छ; Deuteronomy 20:10-14 मा हत्या गर्न, विस्तावरवाद गर्न, बलादकार गर्न सुझाव दिएको पनि छ। मुसलमान धर्ममा Quran (2:191-193)मा इस्लाम धर्म नमान्ने वा त्यसको आलोचना गर्नेको हत्या गर्नु पर्छ; Quran (4:11) र Quran (24:31) मा पितृसत्तालाई प्रोत्साहन गरेको पनि पाइन्छ। यस गरी हिन्दु धर्ममा जात प्रथा, सती प्रथा, नारीलाई नरकको द्वार भनेर महिलाविरोधी मानसिकता दिएको पनि धर्मशास्त्रहरूमा छ।
यसै गरी हेर्दै गएमा हरेक धर्ममा अनेकौँ यस्ता धर्म परम्परा छन् जुन मानवताका खिलाफ छन्। अब हामी ती सबैलाई त २१औँ शताब्दीमा लागु त गर्न सक्दैनौँ। धर्म र परम्परा आवश्क छैनन्। अवश्यक छन् मानवता र जुन धार्मिक परम्परा मानवताको विपरीत छन् र मानवलाई नीच व्यवहार गर्छ त्यसलाई त्याग गर्नु पर्दछ।
९) समलिङ्गी विवाहले परम्परागत विवाहको नियमलाई तोड्छ।
हामीले अघि भन्या जस्तै। परम्परा कहिल्यै एउटै हुँदैन। पहिला हामी सती जानु नैतिक सोच्थ्यौँ अब त्यो सोच्न सक्दैनौँ। हामीले धेरै परम्पराहरू परिवर्तन गरिसकेका छौँ। निरंकुश राजतन्त्रलाई विष्णुको अवतार मान्नु, महिलाहरूलाई नीच देखाउनु, जात-भात, इत्यादि। परम्पराको नाममा कसै प्रति विभेद गर्ने अधिकार धर्म निरपेक्ष राज्यमा कसैलाई हुँदैन। जुन् कुरा आजको युगमा सुहाउँदैन, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्न, चहे त्यो जति वर्ष देखि चलिआओस्। किन भने हामीले विज्ञान र प्रमाणका अधारमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्दै लानु पर्छ। अनि विवाहमा विपरीतलिङ्गीको पेवा पनि यी मध्ये एउटा हो।
१०) समलिङ्गीहरू बच्चा उत्पादन गर्न सक्दैनन्
समलिङ्गीहरुको भूमिका बच्चा उत्पादन गर्नु होइन। सक्दैन भने सक्दैन, यसमा के ठूलो कुरा छ र? यदि कुनै पुरुष र महिला विवाह गरेर बच्चा पाउन चाहान्नन् वा बच्चा जन्माउने रहर छैन, के उनीहरूको विवाहमा प्रतिबन्ध लगाउने? धेरै विपरीतलिङ्गीहरुमा पनि बच्चा जन्माउने शक्ति हुँदैन, के उनीहरूको विवाहमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने? अनि अर्को धेरै कुरा छन् जुन विपरीतलिङ्गी जोडीले रमाउन सक्छन्, चाहे बच्चा पाऊन् या नपाऊन्- जस्तै सम्पत्ति प्राप्ति, विवाह सुविधा।
अनि बच्चा नपाए पनि के भयो त? धर्म सन्तान त राख्न सक्छन् नि! अनि यदि बच्चा जन्माउने नै भए समलिङ्गी पुरुष जोडीले Surrogacy र समलिङ्गी महिला जोडीले IVF गर्न सक्छन् र गरिरहेका छन्। त्यसका साथै अब एउटा नयाँ प्रविधि अनुसार समलिङ्गीहरूले जैविक सन्तान उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकास हुँदैछ। वैज्ञानिकहरूले महिलाको Steam cell बाट Sperm बनाइसकेका छन्। अबको नयाँ प्रविधिले पारलिङ्गी महिलालाई पनि गर्भवती बनाउन सक्नेछ। अबको नयाँ प्रविधिले कृत्रिम पाठेघर बनाएर त्यसबाट बच्चा उत्पादन गर्न सक्ने भैसकेको छ।
बच्चा जन्मन नसक्नु यस शताब्दीको समस्याइ होइन्। अनि अर्को मुख्य कुरा हो कि हामी यस संसारमा बच्चा जन्माउनका लागि होइनौँ, हामी यस संसारमा त्यसैले हौँ कि हाम्रा आमा-बुबाले हामीलाई जन्माए।
११) समलिङ्गी विवाहले मान्यता पाएमा सबै समलिङ्गी हुन्छन्।
अचम्म लाग्छ यस्तो वाहियात तर्क सुन्दा। जब समलिङ्गी हुनु रोजाइ नै होइन कसरी सबै जना समलिङ्गी हुन्छन्? यो त के, महिला अधिकार दिएमा संसारमा पुरुषको जन्मै नहुने हो कि भन्ने डर जस्तो मात्र हो। यसो हुने भए समलिङ्गी विवाहले मान्यता पएको देशहरूमा, मानिल्यौँ समलिङ्गी विवाहलाई सर्वप्रथम मान्यता दिने देशहरूमा त आज सम्म सबै जाना समलिङ्गी भै सक्नु पर्ने, त्यस देशमा त मानव अस्तित्वै हराउनु पर्ने।
१२) समलिङ्गी विवाहले गर्दा बहु-विवाह, जनावरसँग विवाह, हाडनाता विवाह, र बाल विवाहले प्रोत्साहन पाउँछ।
म एउटा कानुनको बारेमा बहस गर्दैछु: त्यो हो समलिङ्गीका लागि कानुनी प्रावधान। यो बाहेकका अन्य कुनै विषय अर्को बेग्लै विषय हो। समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता भएपछि यसको असर समलिङ्गीहरुलाई हुनेछ। अरु विषयहरु योसँग सम्बन्धित छैन। यो केवल समलिङ्गी अधिकारलाई कुख्यात पर्ने तरीका हो। खै त साउदी अरबमा समलिङ्गीलाई थोपा मान्यता छैन, तर बाल विवाह कायमै छ!
१३) समलिङ्गी अभिभावकले पालेको बच्चाहरू राम्ररी हुर्कँदैन।
यो तर्कलाई साथ दिने कुनै डाटा छैन। यसबाट बाल विकासमा पनि केही असर पर्दैन। यस विषयमा थुप्रै अनुसन्धान भैसकेको छ र विपरीतलिङ्गी अभिभावकले हुर्काएको बच्चा र समलिङ्गी अभिभावकले हुर्काएको बच्चामा केही विकासका अन्तर छैन। अनत्र केवल यो हो कि समाजले समलिङ्गी अभिभावक भएका बच्चाअहरुलाई नराम्रो व्यवहार गर्दछ। हेर्नुहोस्:
१४) यो एउटा जीवन शैली हो। पहिला पहिला त यो समलिङ्गीका बरेमा सुनिदैनथ्यो। अहिले मात्र यस्तो कुरा सुन्न पाइरहेका छौँ। यो पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभाव हो।
यो कुनै पनि जीवन शैली होइन। मानील्यौँ कि मानिसहरुलाई आफ्नो यौन अभिमुखिकरणमा रोजाइ छ। त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरू समाजमा अपहेलित हुन, अस्वीकारेको वर्ग हुन किन रोज्लान् त? तपाइँले पहिले सुन्नु भएन किन भने हाम्रो सामाजिक बनोट नै त्यस्तो छ। उदाहरण लिऔँ साउदी अरबको। साउदीमा समलिङ्गीहरुलाई कठोर मृत्युदण्द दिइन्छ तर अझ पनि त्यहाँ समलिङ्गीहरू छन्। त्यहाँका समलिङ्गीहरू पहिला पश्चिमेली देशमा भग्छन्, त्यहाँ स्थायी वास गरेपछि, समलिङ्गी भएको खुलासा गर्छन्। विश्वमा समलिङ्गीको अस्तित्व आदिकाल देखि नै थियो। हो संकीर्णता वा अज्ञानताका कारण विभिन्न कालखण्डहरूमा समलिङ्गीहरुलाई अति-विभेद थियो तर समलिङ्गीको अस्तित्व आदिकाल देखि नै थियो। यस तर्कलाई साथ दिने प्रमानहरू यस किसिमले छन्: History of homosexuality यस लेखमा तपाइँले समलिङ्गीका बरेमा इतिहास पढ्न सक्नु हुनेछ। जस्मा विभिन्न कालखण्डमा समलिङ्गीलाई कस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ र समलिङ्गीको बारेमा व्याप्त संस्कृतिका बरेमा पनि। यसै गरी समलिङ्गी हुनु एउटा क्षणिक(phase) भन्नुको नि कुनै आधार छैन।
१५) समलिङ्गीहरू एकदमै यौन रूपमा अति सक्रिय र वैश्यावृतिमा लागेका हुन्छन्। यिनीहरूमा प्रेम भन्ने चीज हुँदैन। खाली यौन सम्पर्क!
सर्वप्रथम त यौन उत्तेजन सबै व्यक्तिहरूमा हुन्छ। कोहीमा बढी हुन्छ भने कोहीमा थोरै तर यौन इच्छा सबैमा हुन्छ। सबैको जीवनमा आ-आफ्नो रोजाइ हुन्छ, आ-आफ्नै जीवनशैली हुन्छ। यस्तो प्रकारको सामान्यीकरण गर्नु गलत हो। यदि समलिङ्गीहरू माया नगर्ने खाली सेक्स मात्र खोज्ने भए वैवाहिक समानताको कुरै उठदैनथ्यो। कसले भन्यो कि समलिङ्गीहरू माय गर्दैनन् वा एक जानासँग समर्पित भएर बस्न सक्दैनन्? यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छ जहाँ समलिङ्गीहरू मायामा समर्पित भएका छन्, विवाह हरेका छन्, धर्मसन्तान पालेका छन् । केही वा धेरै पारलिङ्गीहरू खाली सेक्स मात्र रुचाउँछन् भन्दैमा सबैलाई त्यसरी नै सामन्यीकरण गर्नु मिल्दैन।
१६) समलिङ्गी सम्बन्धहरूखासै टिक्दैन
हेर्ने हो भने आजकाल अधिकांशको सम्बन्ध ट्क्दैन। यसका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। तर टिकेन भन्दैमा समलिङ्गीहरूको मात्र नटिक्ने होइन। थुप्रै विपरीतलिङ्गीहरूको विवाह वा सम्बन्ध टिक्न सक्दैन। धोका, सम्बन्ध विच्छेद र विवाह अतिरिक्तका सम्बन्ध विपरीतलिङ्गीहरूमा पनि सामान्य भैसक्यो। यस कारण सबै समलिङ्गी सम्बन्ध टिक्दैन भन्न मिल्दैन।
१७) तिमी पहिला यस्तो थिएनौ
प्राय जुनै पनि समलिङ्गी वा पारलिङ्गी वा द्वीलिङ्गीहरूले यस्तै सुन्नु परेको हुन्छ। तर कसैले पनि मानिसको आन्तरिक अनुभव र भावनाहरू बुझ्न सक्दैन। व्यक्तिले भनेमा मात्र थहा हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले आफूलाई समलिङ्गी भनेर भनेन भने कसैले थहा पाउनै सक्दैन। पारलिङ्गीहरूलाई उनको व्यवहारले शङ्का गरे पनि पक्का पक्की त उसले भने पछि मात्र हुन्छ। धेरै समलिङ्गीहरू समाजको डरले आफू विपरीतलिङ्गी भएको नाटक गर्छन् वा समाजलाई देखाउन खोज्छन्। पारलिङ्गीहरूको पनि यस्तै हो। अब हिम्मत आएर उचित अवस्था महसुस गरेको हुँदा मात्र उनीहरूले आफ्नो पहिचान खुलाउँछन्। अधिकांस त समाजको डरले पनि लुकेरै बस्छन्।
१८) समलिङ्गी विवाहले त संसारै ध्वस्त गर्छ!
यो कुरा फेरी दोहोरिएर “समलिङ्गी हुनु एउटा रोजाइ” भन्ने भ्रममा सम्पर्क गर्न जान्छ। सर्वप्रथम त समलिङ्गी हुनु कुनै रोजाइ होइन। यो रोजाइ हो भन्नेहरूसँग कुनै वैज्ञानिक प्रमाण पनि छैन। समलिङ्गीहरू त जन्मन्छन् नै जन्मन्छन् यो प्राकृतिक प्रणालीलाई चाहेर पनि कसैले रोक्न सक्दैन। तर समलिङ्गीहरूले अधिकार पाउन बित्तिकै संसारमा सबै जाना समलिङ्गी भैदिन्छन् भन्ने भ्रम पाल्नु अधारहीन हो। यो असम्भव कुरा हो। महिला अधिकार पायो भने संसारमा पुरुषै जन्मन छोड्छ। भएका पुरुषहरू पनि लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बन्नेछन्, भन्नु कतिको तार्किक होला, आफै बुझ्नुस्। समलिङ्गी जन्मनुको अर्थ यो होइन कि विपरीतलिङ्गी जन्मँदैन। जन्मन्छन् त! विपरीतलिङ्गीहरू बच्चा जन्माउँछन्, समलिङ्गीहरू चाहे वैज्ञानिक प्रविधिले उत्पादन गर्छन्, नचाहे एडोप्ट गर्छन्। बच्चा नै नचाहे त विपरीतलिङ्गीहरूले नि जमाउँदैनन्।
१) द्वीलिङ्गी भनेको के हो?
कुनै पनि व्यक्ति जो आफ्नो विपरीत लिङ्ग एवम् समान लिङ्ग दुबै तर्फ आकर्षित हुन्छ, ती द्वीलिङ्गी हुन्। अर्थात जब कोही पुरुष पुरुष र महिला दुबै तर्फै आकर्षित हुन्छ, ऊ द्वीलिङ्गी पुरुष(Bisexual man हो। जब कोही महिला महिला र पुरुष दुबै तर्फै आकर्षित हुन्छ, ऊ द्वीलिङ्गी महिला(Bisexual woman) हो। अझ थप जानकारीका लागि हेर्नुहोस्
२) द्वीलिङ्गी भनेर हामीले त विज्ञान पढ्दा Hermaphrodite भनेर पढेको! यहाँ त अर्कै परिभाषा छ नि!
खास गरी यस्तो हो। पुरानो शब्द भण्दारमा Bisexual भनेको Hermaphrodite जस्को दुबै पुलिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी अङ्ग हुन्छ भनेर परिभाषित थियो। तर अहिलेको शब्द भण्डारमा यसको अर्थ परिवर्तन भैसक्यो। नेपालका सबै जना हल्का विश्व समुदायसँग खास जानकार नहुने गरेकाले यही पुरानो अर्थ लगाएर विज्ञानका पुस्तकहरू प्रकाशित गरेका छन्। जस्तै:- Gay भनेको पहिला “खुशी” भन्ने अर्थ लाग्थ्यो। पछि गएर “समलिङ्गी” भन्ने अर्थ लाग्यो। अब जब “Lesbian” शब्द निस्क्यो “Gay”को अर्थ “समलिङ्गी पुरुष” भनेर लगियो। त्यस्तै हो, नझुक्किनुस्।
३) के द्वीलिङ्गीहरू कन्फुजनमा छन्?
होइन। जसरी विपरीतलिङ्गी हुनु र समलिङ्गी हुनु दुबै सामान्य र प्राकृतिक हो, द्वीलिङ्गी हुनु पनि उत्तिकै सामान्य हो र उनीहरु कुनै प्रकारको कन्फ्यूजनमा छैनन्।
४) द्वीलिङ्गीहरुलाई पुरुष महिला दुबै प्रति बराबर आकर्षित हुन्छन् र?
यो आवश्यक छैन। यो व्यक्तिमै भर पर्छ। कसैलाई महिला र पुरुष दुबै प्रति समान आकर्षण होला। कसैलाई महिला प्रति बढी र पुरुष प्रति थोरै आकर्षण होला। कसैलाई पुरुष प्रति बढी र महिला प्रति थोरै आकर्षण होला।
५) यो एउटा जीवन शैली हो। पहिला पहिला त यो द्वीलिङ्गीका बरेमा सुनिदैनथ्यो। अहिले मात्र यस्तो कुरा सुन्न पाइरहेका छौँ। यो पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभाव हो। बरु विपरीतलिङ्गी वा समलिङ्गी प्राकृतिक होलान् तर यो द्वीलिङ्गी भनेको आफ्नो यौन प्यासलाई फस्ट्याउन मात्र बनेको हो ।
मण्डन देउपुर नगरपालिका–६ सिपाघाटकी २५ वर्षीया सरिता दुलालको हत्यामा पारिवारिक संलग्नता देखिएपछि परिवारका सबै जनालाई जिल्ला अदालत धुलिखेलमा आज कर्तव्य ज्यानअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले श्रीमान् सुदीप, ससुरा पीताम्बर, सासू गङ्गा, जेठाजु केशव र जेठानी सङ्गीताविरुद्ध सरिताको हत्यामा संलग्न भएको जनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको हो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता लोकबहादुर कटुवालले...
वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ ०७ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१९ मई २१ तारिख, ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया, मूल नक्षत्र, धनु राशिको चन्द्रमा, सिद्धि योग, वणिज र विष्टि (भद्रा) करण, भोलिको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), आजका लागि अशुभ समय :– राहु काल : दिउँसो ०३:२४ देखि ०५:०६ सम्म, यमघण्ट : बिहान ०८:३८ देखि १०:१९ सम्म, गुलिक काल...
सप्तरी प्रिमियर लिगको दोश्रो सिजन आयोजना हुने, अक्सनको लागि खेलाडी दर्ता सुरु
राजविराज / सप्तरी प्रिमियर लिग टि-२० क्रिकेट प्रतियोगिताको दोश्रो सिजन आयोजना हुने भएको छ। सप्तरी क्रिकेट संघले आयोजना गर्ने लिगको पहिलो सिजन गत वर्ष असारमा आयोजना गरिएको थियो। दोश्रो सिजनको अधिकारिक मिति तय नभए पनि यही जेठ महिनाको अन्तिममा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता पछि सप्तरी प्रिमियर लिगको दोश्रो सिजन सुरु हुने सप्तरी क्रिकेट संघका सचिब...
एक्जिट पोलहरूमोदीकोमा विजय : यस्ता छन् जीतका ४ कारण
भारत / भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष अमित शाहसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आरम्भिक बयानमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावमा आफूहरू विजयी भएको घोषणा गरेका थिए । उनले चुनाव परिणामपछि बहालवाला बहुमतको सरकारले बहुमतकै साथ दोस्रो कार्यकाल जित्ने भारतीय राजनीतिकै दुर्लभ घटना हुने बताए । चुनाव सकिएलगत्तै सार्वजनिक भएका एक्जिट पोलले केही संकेतहरू दिएका भए पनि...
तीन वर्षदेखि ठेकेदार बेपत्ता, नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य अलपत्र ।
सर्लाही / सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य तीन वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । ठेकेदारले २०७३ साल वैशाखमा पूर्णरुपमा काम छाडेर हिँडेदेखि भवन निर्माणको काम रोकिएको हो । लालबन्दी नगरपालिका–८, मा नगरपालिकाको दुई तले भवन निर्माणका लागि लोकविर बेताली पाँच कुमारी जेभी काठमाण्डौंले दुई करोड १२ लाखमा ठेक्का सकारेको थियो । ०७२ असार ७...
राजपाका दुई केन्द्रीय सदस्य पुर्पक्षका लागि कारागार चलान
राजविराज । उपभोक्ता समिति गठन प्रकरणमा किर्ते गरेको आरोपमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजापा)का केन्द्रीय सदस्यद्वय जेल चलान भएका छन्। सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशमा राजपाका केन्द्रीय सदस्यद्वय बीपी यादव र हरि मण्डल सोमबार पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा चलान भएका छन्। न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलाशले उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि कारागारमा थुनामा राख्ने आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ। त्यसैगरी...
विराटनगर । मस्तिष्कघातका कारण गत बैशाख २४ गतेदेखि विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा उपचाररत बरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. विमल अग्रवालको मंगलबार राति निधन भएको छ । उनको मंगलबार राति १०.५८ बजे निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ । ६ वर्षदेखि विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत ४० वर्षीय अग्रवाललाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आफै गाडी चलाएर नोबेल अस्पताल पुगेका थिए...
पोखराका सडकमै कायकीङ !
पोखरा । उचित निकास नहुँदा पोखराको पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइडको सडकमै आकासे पानी जमेको छ। सडकमा जमेको पानीमा स्थानीय युवाले विरोधस्वरुप कायक चलाएका छन्। पोखरा महानगरपालिका, सडक विभागमा आकासे पानीको उचित निकास दिन व्यवस्थित ढल निर्माणकालागि माग गरेपनि सुनुवाई नभएपछि ध्यान आकर्षणका लागि कायक चलाएको स्थानीय अनिल थापाले बताए। नेपालमा सबैभन्दा धेरै पानी पोखरामा पर्दछ। उक्च...
भन्सारमा बदमासी : चेकजाँच नै नभई यसरी नेपाल भित्रियो एक कन्टेनर सामान
बुटवल । भन्सार कर्मचारी, भन्सार राजश्व गस्ती र तस्करको मिलेमत्तोमा बेलहिया नाकाबाट जे पनि भित्र्याउन सम्भव छ भन्ने कुराको उदाहरण मंगलबार भैरहवा नाकामा भएको एउटा घटनाले पुष्टि गरेको छ। भन्सार नाकामा तीन तहको सुरक्षालाइ पार गर्दे बिना भन्सार लाखौं मुल्यका सामान बोकेको कन्टेनर नेपाल भित्रिएपछि त्यस्तो तथ्य उजागर भएको हो। सोमबार दिउँसो करिब साढे ४...
वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ ०८ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१९ मई २२ तारिख, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी, पूर्वाषाढा नक्षत्र, धनु राशिको चन्द्रमा, साध्य योग, बब र बालब करण, आजको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), भोलिको मूहुर्त : शुभविवाह, रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा) आजका लागि अशुभ समय :– राहु काल : दिउँसो १२:०१ देखि ०१:४३ सम्म, यमघण्ट : बिहान ०६:५६ देखि...